Fil d'actualités du 18/11/2019
18/11/2019 - 15:30 : FANATANJAHATENA: ho avy eto Madagasikara i Gianni Infantino, filohan’ity rafitra mpiahy ny baolina kitra maneran-tany ity. Toy izao ny fandaharam-potoana amin’izany: -24 Novambra : Fahatongavan’ny filohan’ny FIFA -25 Novambra : Fihaonana amin’ny filoham-pirenena Malagasy sy ny filohan’ny FMF -26 Novambra : Fivoriana any Ma
18/11/2019 - 15:15 : ONIVERSITE FIANARANTSOA:Nisy androany ny fanehoana nataon'ireo mpianatra ao amin'ny Oniversiten'i Fianarantsoa tamin'ny alalan'ny akanjo fitafy fotsy,mena, maitso ny fitakiana ireo Nosy manodidina.
18/11/2019 - 15:00 : ANTSIRABE:Ny Fokontany Andranovisy indray no nanantaterahana ny asa tagnamaro izay nataon'ny teo anivon' ny foibe-paritry ny Serasera sy ny kolotsaina tao Vakinankaratra, asa tagnamaro andiany faha-9 andiany faha 9 moa ity asa ity.
18/11/2019 - 14:30 : ONIVERSITE ANTSIRANANA:Nanapa-kevitra ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mambra ny SECES sampana Antsiranana, nandritra ny fivoriambe nataon’izy ireo ny 15 novambra 2019, fa hampiato ny asa pedagojika rehetra manomboka ny alatsinainy 18 novambra 2019.
18/11/2019 - 14:00 : FANARIANA FAKO : MISEDRA OLANA NY KAOMININA TELO Nanome toromarika ireo Sefo Fokontany rehetra, ny mpitantana ny kaominina Ivato, nandritra ny fananganan-tsaina androany ny mba hanentanana ny mponin'Ivato iray manontolo hifehy ny fakony isan-tokantrano mandritra ny fotoana voafetra.
18/11/2019 - 12:00 : NOSI BE:Natao tao Mahabo ny Manongarivo ny 17 Novembre 2019 fanitrihana fanompohana hafolan-tany ny Mpanjaka HIAHAI Amada Andriantsoly.
18/11/2019 - 11:30 : ANOSY:Tonga mijery ifotony ny fandaminana aty amin'ny Plan Anosy ny Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola.
18/11/2019 - 11:00 : FANATANJAHATENA:UFFOI (Union des Fédérations de Football de l'Ocean Indien),Mandray anjara amin'ny Tournoi UFFOI atsy amin'ny Nosy Maurice ihany koa ny ekipa nasionaly Malagasy latsaky ny 15 taona , ankehitriny.
18/11/2019 - 10:30 : KFC:Efa misokatra amin'izao fotoana izao ny KFC Ambodivona izay efa niandrasan'ny maro.
18/11/2019 - 10:00 : JIRAMA:Hisy fahatapahana ny herinaratra anio Alatsinainy 18 novambra 2019 eny : MANJAKARAY , nanomboka tamin’ny 09 ora maraina – 05 ora hariva.
Archive du 20190516
EPP Iavoloha, ny hetsika Nanaovan’ny prezidansa « Asa tana-maro »
« Miainga avy any amin’ny andrim-panjakana ambony indrindra ny maodely amin’ny fifanohanana sy fiaraha-mientana, indrindra fotoana izao hifanomezan-tanana hanarenana ny firenena iombonana »,
Kolikoly avo lenta Tsy ho afa-bela ihany koa ny MAPAR...
Henjehina ny olon'ny HVM fa hoe nandray 50 tapitrisa ariary. Io ilay resaka malety tamin’ny fampandaniana ny lalàna fehizoro momba ny fifidianana ny volana aprily 2018.
Cua sy ny boriborintany fahefatra Mampianatra informatika maimaimpoana vehivavy miisa 54
Legende : Faly avokoa ireo vehivavy tompon’andraikitra ao amin’ny Boriborintany faha-efatra nahazo fiofanana
Lalàna vaovao mifehy ny fifamoivoizana Toherin’ireo mpitatitra ny fampiharana azy
Somary nisy fifanoherana kely ihany ny fihaonana teo amin’ireo mpitatitra sy ny mpitandro ny filaminana ary ny birao mahaleotena iadiana amin’ny kolikoly sy ny Pnud omaly tetsy amin’ny le pavé Antaninarenina.
Nitrangana fanafihan-dahalo tao amin’ny fokontanin’ Andranolavamena, Amparafaravola ny talata alina teo, omby 46 no lasan’ny dahalo ary olona 5 no voatifitra
Malagasy Maro no roboka amin’ny filokana
Vintana sa fahaizana ? Inona no tokony hatao raha te handresy amin’ireny loka st tsapa vintana ireny ?
Trafikana zava-mahadomelina Rongony 30 gony tratra tao anaty “Camion citerne”
Rongony 700kg tratran’ny zandary tao Ankaramena noho ny fanomezam-baovaon’ny olona tsara sitrapo. Omaly tamin'ny 3ora maraina, nahazo antso an-tariby ny mpiara-miasa iray ao amin’ny paositry ny zandarimaria Ankaramena.